Isaia 15 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
15 Ny fanamelohana an’i Moaba:+ Voaroba nandritra ny alina i Aran’i+ Moaba, ka nangina. Voaroba nandritra ny alina koa i Kiran’i+ Moaba ka nangina. 2 Niakatra hitomany tany amin’ny tempoly sy tany Dibona+ izy, eny, nankany amin’ny toerana avo. Midradradradra i Moaba noho ny amin’i Nebo+ sy Medeba.+ Nosolaina+ daholo ny lohan’ny olona ao, ary noharatana daholo ny volombava. 3 Misikina lamba gony+ izy ireo eny an-dalana. Midradradradra sy mitomany eny an-tampon-trano+ sy eny an-tany malalaka ny olona rehetra ao, ary mitomany+ eny am-pidinana izy ireo. 4 Miantsoantso i Hesbona sy Elale,+ ka re hatrany Jahaza+ ny feony. Noho izany, dia mihiaka mafy foana ireo miaramilan’i Moaba. Tora-kovitra ilay firenena. 5 Mitaraina ny foko ato anatiko ato noho ny amin’i Moaba.+ Tonga hatrany Zoara+ sy Egleta-selisia+ ny mpandositra avy any Moaba. Samy mitomany izy ireo miakatra ny fiakarana any Lohita,+ ary mitaraindraina noho ny amin’ilay loza izy eny amin’ny lalana mankany Horonaima.+ 6 Ritra tanteraka ny ranon’i Nimrima.+ Maina ny ahi-maitso, maty ny ahitra, ary tsy misy zava-maitso intsony.+ 7 Koa ny zavatra sisa tavela sy ny fananana rehetra notehirizin’izy ireo, dia hoentiny any amin’ny lohasaha falehan-driaka misy hazo aravaha. 8 Manerana ny faritanin’i Moaba+ ny fitarainana, ary tonga hatrany Eglaima sy Bera-elima ny fidradradradrana, 9 satria nanjary feno ra ny ranon’i Dimona. Anisan’ny zavatra hafa hapetrako ao Dimona ny liona, izay hanafika ny sisa miangana any Moaba sy ny sisa tavela eo amin’ilay tany.+